Phrases, their meanings and origins (3) - Myanmar Network
Phrases, their meanings and origins (3)
Posted by zar ni (My Way!) on December 14, 2012 at 11:57 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
A foregone conclusion (ကျိန်းသေပေါက်နိဂုံး)
တစ်ခုခုကို မဖြစ်ခင်၊ မလုပ်ခင်ကတည်းက သေချာပေါက်ကြိုက်တင်တွက်ဆထားခြင်း၊ မလွဲမသွေဖြစ်လာမည့်နိဂုံးကံပါတ်အဆုံးသတ်။
Shakespeare က Othello, 1604: မှာဒီလိုရေးထားခဲ့တာပါ။
A friend in need isafriend indeed (အရေးကြုံတဲ့အခါကူညီသူမှသူငယ်ချင်းကောင်း)
ဒီစကားပုံက တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ “a friend in need isafriend indeed” လား “a friend in need isafriend in deed” သေသေချာချာ အနက်ဖွင့်ကြည့်ရင် တစ်မျိုးထက်မက ထွက်လာတာတွေ့ရပါမယ်။
ကိုယ်ကအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာ ကူညီပေးတဲ့သူဟာ သူငယ်ချင်းကောင်း။
(ကိုယ့်ရဲ့) အကူအညီလိုနေတဲ့သူငယ်ချင်းဟာ တကယ့်သူငယ်ချင်းကောင်း။ (ဆိုလိုတာက ကိုယ်ကူညီပေးလိုက်တဲ့အတွက် အဲဒီလူဟာ ကိုယ့်ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကိုယ်သူငယ်ချင်းလာလုပ်တဲ့သူဟာ အကူအညီလိုနေလို့ဖြစ်တယ်။ “သူပြုံးနေသည်။ သတိထားပါ” ဆိုတာမျိုး။)
(ကိုယ့်ရဲ့)အကူအညီလိုနေတဲ့သူငယ်ချင်းဟာ အဲဒီလို လိုနေကြောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖော်ပြသူဟာ သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်တယ်။
A golden key can open any door (ငွေကတံခါးအားလုံးကိုဖွင့်နိုင်တယ်)
Jill: I'm amazed that Sally got intoagood university; her grades were so poor.
Jane: Well, she comes fromawealthy family, andagolden key can open any door.
ဒီသဘောတရားဟာငွေကြေးပေါ်ပေါက်လာတဲ့သက်တမ်းနီးပါးဟောင်းနွမ်းနေပါပြီ။ ပထမဆုံးရေးသားခဲ့သူက အင်္ဂလိပ်ပြဇာတ်ဆရာ John Lyly လို့သိရပါတယ်။ Euphues and his England, 1580:ဆိုတဲ့ပြဇာတ်မှာရေးခဲ့တာပါ။
A good man is hard to find (ယောက်ျားကောင်းအရှာခက်) Good men are scarce.
Larry is the best employee I've ever had, and I'll go toagood deal of effort to keep him, because good men are scarce.
"I think you should marry John," Sue advised her daughter. "He'sagood man, andagood man is hard to find."
အဆိုတော်ကြီးမာမာအေးရဲ့ “ရှာပေဦးတော့ ထမင်းထုပ်ကြီးနဲ့ လူပါမသိုးယုံဖြင့် မှာလိုက်ချင်သည်” ဆိုသလို အခုခေတ်ကြီးမှာ ယောက်ျားကောင်း(ခင်ပွန်းကောင်း)တစ်ယောက်ရဖို့ အင်မတန်မှ ခက်လှသည်လို့ မိန်းကလေးတွေညည်းငြူတတ်ကြပါသည်။ ဒီစကားစုကို စထွင်တဲ့သူက Eddie Green ပါတဲ့။ သူက A good man is hard to find ဆိုတဲ့သီချင်းကို1918 ခုနှစ်မှာရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီသဘောတရားမျိုးရေးခဲ့ပြောခဲ့တာတော့ သူ့အရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်း ကပဲဖြစ်ပါတယ်။
Onahiding to nothing (မဖြစ်နိုင်မှန်းသိရဲ့နဲ့)
To be inasituation where it is impossible to succeed
We were onahiding to nothing trying to get more money out of the government.
ဒီစကားစုဟာ အားကစားလောကမှာ အသင်းနှစ်သင်းယှဉ်ပြိုင်တဲ့အခါ အင်အားကြီးတဲ့အသင်းက ကျိန်းသေနိုင်ဖို့သေခြာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရည်ညွှန်းသုံးစွဲကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လောင်းကြေးကို အလေးအများကြီးပေးထားရတဲ့အတွက် သူ့ဘက်ကလောင်းရင်နိုင်လဲ ဘာမှမရဘူး၊ မထူးဘူးလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
A house divided against itself cannot stand (နွားကွဲလျှင်ကျားဆွဲမည်)
If the members ofagroup fight each other, the group will disintegrate. (Often the group under discussion isafamily.)
The leader of the newly formed union tried hard to reconcile the different factions within his organization, because he knew thatahouse divided against itself cannot stand.
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာမိသားစုဝင်အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်နေလျှင် ဒီအိမ်ထောင်ဟာပြိုကွဲရမှာပဲလို့အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲကလာပါတယ်။ Matthew 12:25 (King James Version):
a knight in shining armour (ကယ်တင်ရှင်)
someone who helps you when you are inadifficult situation
She looked around the bar to see if there wasaknight in shining armour who might come and save her from this awful man.
ဥရောပအလယ်ခေတ်က knight လို့ခေါ်တဲ့ သံချပ်ဝတ်သူရဲကောင်းတွေဟာမြင်းစီးလို့ ဒုက္ခကြုံနေတဲ့သူတွေ (အမျိုးသမီးများ) ကိုကယ်တင်လေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ကျဉ်းထဲကျပ်တည်း အခြေအနေမျိုးမှာ ကယ်တင်ရှင်လူစွမ်းကောင်းကိုမျှော်မိတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးစွဲကြပါတယ်။
À la carte (ကြိုက်ရာရွေးချယ်မှာကြားနိုင်သည့်မီနူးစံနစ်)
If you eat à la carte, you choose each dish fromaseparate list instead of eatingafixed combination of dishes atafixed price.
I don’t know whether to have the set-menu or go à la carte.
ပြင်သစ်ဘာသာကနေဆင်းသက်လာပါတယ်။ according to the card (menu card) မီနူးအတိုင်းလို့အဓိပ္ပါယ်ရပြီးဟင်းတစ်မျိုးစီကိုသတ်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့စိတ်ကြိုက်မှာယူစားသောက်နိုင်ပါတယ်။ set-menu တွေလိုစားစားမစားစားအကုန်လုံးအတွက်ပေးရတာမဟုတ်ပါဘူး။
A legend in one's own lifetime (တစ်ခေတ်မှာတစ်ယောက်)
မူရင်းစာသားက A legend in her lifetime ဖြစ်ပါတယ်။ Eminent Victorians ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ Florence Nightingale အကြောင်းကို Giles Lytton Strachey က 1918 ခုနှစ်မှာရေးသားခဲ့တာပါ။
A leopard cannot change its spots (ကျားသစ်ဟာကျားသစ်ပါပဲ)
သမ္မာကျမ်းစာလာစကားပါ။ Jeremiah 13:23 (King James Version):
"Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? then may ye also do good, that are accustomed to do evil." သူယုတ်မာဟာသူတော်ကောင်းအရေခြုံသော်လည်းခဏ အတွင်းဗီဇပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Permalink Reply by UMyo Min on December 14, 2012 at 16:14
Permalink Reply by koyemyinttun on December 14, 2012 at 18:08
Permalink Reply by padout,layy on December 15, 2012 at 4:11
Permalink Reply by lamaitulum on December 15, 2012 at 10:29
Permalink Reply by Soe Soe on December 15, 2012 at 15:53
Thank you for sharing phrases.
Permalink Reply by Ko Yin Kyaw on December 16, 2012 at 9:51
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on December 22, 2012 at 13:54
Thanks. I really love those phrases.